Emailvision mandefa mailaka, fahalalàna ara-tsosialy ary mpanjifa | Martech Zone
Nandefa mailaka momba ny mailaka, ny fahalalàna ara-tsosialy ary ny mpanjifa ny Emailvision
Talata, Oktobra 25, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny volana aprily dia nanambara izany izahay Ny emailvision dia nividy SmartFOCUS. Oktobra izao ary ny valin'ny fampidirana dia zava-mahagaga fotsiny, manambatra ny mailaka, Intelligence ara-tsosialy ary momba ny mpanjifa amin'ny vahaolana tokana. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny famotsorana ny Campaign Commander Enterprise.
SmartFOCUS nanana vahaolana mpanjifa-mpizara miaraka amina interface tsy mampino mpampiasa sy angon-drakitra tompony izay nanamora ny fananganana trano fitehirizana angon-drakitra terabyte nefa mora ny manaparitaka azy ireo amin'ny fotoana tena izy - ao anaty interface drag sy drop fotsiny.
Alohan'ny fahazoana SmartFOCUS, Emailvision nividy Objective Marketer - tabilao media sosialy. Toa izy ireo dia nanambatra ny tsara indrindra amin'ny haitao ara-tsosialy sy ara-pahalalana ho an'ny mpanjifa amin'ny famoahana vokatra vaovao, Campaign Commander Enterprise. Tsy manao ny rariny ny teny… ka ity misy horonan-tsary niarahan'izy ireo:
Inona ny olan'ny indostria? Ny tontolo an-tserasera dia namorona tahirin-kevitra be loatra, saingy olana lehibe ho an'ny indostrian'ny doka / marketing no tena nanao an'izany. Ny famoahana hevi-baovao azo tanterahina avy amin'ny angon-drakitra dia loharanom-pahalalana matanjaka ary ny vahaolana momba ny mpanjifa eo an-toerana dia tonga miaraka amin'ny vidin'ny fananganana sy ny fahazoan-dàlana.
Ahoana no hamahan'ny Campaign Commander Enterprise Edition ity olana ity? Emailvision dia manome ny mpivarotra fomba mora vidy hamadika haingana ny angona avy amin'ny mailaka, fampielezan-kevitra amin'ny finday sy sosialy ho faharanitan-tsaina azo ampiasaina. Miaraka amin'ity fahiratan-tsaina ity dia afaka mamaky mpanjifa tsara kokoa izy ireo ary manolotra hafatra mifandraika kokoa amin'ny sidina. Ireo mpampiasa farany dia nahita fiakarana goavana amin'ny fidiram-bola avy amina fivarotana sy fivarotana irery.
Inona no nolazain'ny mpanjifa beta? Ireo mpanjifa ao amin'ny programa fanandramana beta dia mitatitra fa ny vokatra dia manafaingana ny fizotran'ny fikarohana ireo firaketana mpanjifa an-tapitrisany hahafantarana ireo fotoana mety hatramin'ny andro ka hatramin'ny segondra vitsy monja.
Inona no tombony azo avy amin'ny SaaS? Na dia sarobidy aza ny faharanitan-tsain'ny mpanjifa dia lafo ihany koa taloha. Ny vahaolana eny ifotony dia manodidina ny $ 1M ary naharitra am-bolana hanatanterahana azy. Nila mpandinika data ihany koa mba hahatakarana ny valiny. Ny Campaign Commander Enterprise Edition dia manome ny olon-drehetra haka sary an-tsaina haingana ny angona sy hanaraka ny fieritreretany mba hamorona fizarana vaovao azo ampiasaina eo noho eo.
Nahoana ianao no tokony hikarakara momba ny Emailvision? Emailvision dia mandalo fotoam-pivelarana sy fanavaozana lehibe. Taorian'ny nahazoany smartFOCUS sy ObjectiveMarketer tamin'ity taona ity, ny orinasa dia manana birao sy ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa any amin'ny firenena 19 ary manao fanentanana manerantany. Ny vokatra vaovao dia manolotra fitaovana fampiroboroboana fifandraisana an-tserasera feno sy be pitsiny indrindra takiana mba hampitombo be ny fifandraisana sy ny tombombarotra azo avy amin'ny programa fifanakalozana fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Miarahaba an'i Nick, Charles ary ny ekipa ao amin'ny Emailvision! DK New Media dia niara-niasa tamin'ny ekipa tamin'ny fotoana nahazoan'izy ireo ny SmartFOCUS ary mampientam-po ny mahita ity tena fandrosoana tena eo amin'ny sehatry ny indostria ity. Misoratra anarana amin'ny fampisehoana amin'ny Orinasa komandin'ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka mailaka toerana.
Tags: Komandin'ny fampielezan-kevitraCampaign Commander Enterprisemailakasmartfocus
Facebook no tranokala vaovao
Lalana 12 mankany amin'ny taranaka ateraky ny famoronana